Ngwanrọ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nyocha gị banyere nchọgharị Uranus? Ọ bara uru ịtinye ma ọ bụ na e nwere ihe ọzọ na-enye obi ụtọ?
Nyocha gị banyere nchọgharị Uranus? Ọ bara uru ịtinye ma ọ bụ na e nwere ihe ọzọ na-enye obi ụtọ? Ahụghị m ihe nchọgharị dị egwu. N'ihe m maara, onye ọ bụla anaghị akwado ya. Ọfọn, ma e wezụga nke ahụ n'ihi ...
Etu esi achọta ma dochie akara akara "?"
Kedu otu n'ime Excel iji chọta ma dochie akara ajụjụ "?" Pịa Ctrl H ma n'ọhịa nke mbụ banye "gịnị ka anyị na-agbanwe" n'okwu a "?" Na nke abụọ "gịnị" bụ "L" wee pịa dochie…
Windows 8 Activator Enyemaka iji chọta onye ọrụ ọrụ maka Windows 8 Pro 64x Build 9200. Daalụ n'ọdịnihu.
Windows 8 Activator Enyemaka iji chọta onye ọrụ ọrụ maka Windows 8 Pro 64x Build 9200. Daalụ n'ọdịnihu. Ndị ọrụ KMS maka mmeri 8 na 8.1. Ma eleghị anya ọ ...
! Olee otú ịgbatị avast aha?
! Olee otú ịgbatị avast aha? nke ọma, ana m echeta ma ọ bụrụ na ị kwụsịghị oge na elekere otu afọ gara aga, ma ọ bụrụ na ọghị arụ ọrụ, kpochapụ faịlụ avast na ndekọ ahụ ma ọ bụrụ na ...
ebe ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ ederede WORD online n'enweghị nbudata ihe omume ahụ n'onwe ya.
ebe ị nwere ike ịmepụta akwụkwọ ederede WORD online n'enweghị nbudata ihe omume ahụ n'onwe ya. Na SkyDrive Maka ugbu a, ị ghaghị ịnweta akaụntụ Windows Live. Ọ bụrụ na ọ bụghị, denye igbe igbe na Hotmail ...
Kọmputa anaghị esi n'ọnọdụ ihi ụra pụta
Kọmputa anaghị esi n'ọnọdụ ihi ụra pụta. Nke a bụ yikarịrị ka ájá dị na onye nju oyi =) azịza ndị a bụ ihe nro ebe a .. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịgbanwuo ike mbanye na ntọala ike ...
Enyemaka na PowerPoint. Kedu otu esi eji ya?
Enyemaka na PowerPoint. Kedu otu esi eji ya? Ihe omume ahụ na-emepụta slides. Ihe ngosi nke ọ bụla nwere ike ịnwe ederede, ihe atụ, ihe dị iche iche dị iche iche. Ị nwere ike ịgbanwe usoro nke ihe ngosi, gbakwunye ndị ọhụrụ, wepụ ihe na-adịghị mkpa, na ...
Meghee ikikere ikikere Pro License
Gbanye ikikere ikike maka Regclean Pro http://relizua.com/optimizaedu-os/36-regcleaner-rus-key.html enwere isi igodo Ekele dịrị gị maka inye aka 00ZNXX-FA684X-21PQZQ-41HXNXXP Tinye usoro ahụ, debanye aha na aka. Ka ị ghara igodo igodo: Usoro 89-th: Tinye na faịlụ nnabata ...
mgbe ị na-etinye itunes, ozi "Error malite ọrụ ekwentị mkpanaaka Apple" na-apụta
mgbe ị na-etinye itunes, ozi "Error malite ọrụ ekwentị mkpanaaka Apple" na-apụta. 1. Ikwesiri imechi iTunes. Kwupuo ngwaọrụ mkpanaaka na komputa a ka inwere ike ịmaliteghachi ọrụ ...
Kedu iji gbanyụọ Windows 7 na-akpaghasị aka ya?
Kedu otu ga-esi gbanyụọ nwelite Windows 7? M na-akwado! na-abaghị uru manụ mkpofu ahihia comp. Ntuziaka ga-esonye n'usoro, ị nwere ike lee anya cifraservis.ru/upravleniewindows/otlucit_obnovleniya/ Ogwe njikwaSystem na SecurityWindows Mmelite na NkwadoỌrụ nke parameters Ndụmọdụ imere nke a: “Ibu Ibu ...
Gịnị bụ usoro a na-akpọ maka hacking Windows 7?
Gịnị bụ usoro a na-akpọ maka hacking Windows 7? N'ebe a, a kọwara ya n'ụzọ doro anya: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3908973 activator loader mgbe ị wụnye Windows, kwụsị ọrụ rụọ ọrụ, mgbe nwụnye, gbanyụọ nrụgha melite vzlomz Nchịkọta zuru ezu ...
Everest ma ọ bụ AIDA64. Kedu n'ime usoro ndị dị n'elu dị mma?
Everest ma ọ bụ AIDA64. Kedu n'ime usoro ndị dị n'elu dị mma? Achọrọ iji abụọ taxis Everest. IMHO M na-eji Everest. Ezi prog. Ọ bụ otu ụlọ ọrụ ahụ. FinalWire ka eze mara ọkwa na ...
Nyocha na echiche banyere Comodo
Nyocha na echiche banyere Comodo Konstantin, ị ka na-akụ ego ahụ n'ime ha. Karịsịa na Russia 🙂 Gbanyere Komodo na PC m ejighi eji rụọ ọrụ n'ihi nnwale. Tupu nke a, m nwalere na ...
Ebee ka ibudata Okwu 2007? Ndị mmadụ, na-enye njikọ pliz na Okwu 2007. Ọ bụ na-achọsi ike kryaknuty. Mgbe ahụ na ịntanetị m enweghị ike ịchọta
Ebee ka ibudata Okwu 2007? Ndị mmadụ, na-enye njikọ pliz na Okwu 2007. Ọ bụ na-achọsi ike kryaknuty. Mgbe ahụ, na ịntanetị m enweghị ike ịhụ LLC bro, ị nọ ebe a http://otvet.mail.ru/question/75572500/. Kar Karychu ekele! enyocha ihe niile ...
Achọrọ m usoro ihe omume ederede. Nke mere na ọ na - achịkwa faịlụ TXT ahụ agwụla, m jisiri ike ide akwụkwọ n'okpuru akwụkwọ.
Achọrọ m mmemme iji dee ederede. O kwuru nkea ederede faili TXT ahụ okokụre, m jisiri ike dee ya n'okpuru ya. A na - akpọ "Talker" ụdị mmemme - ibudata ebe a http://biblprog.org.ua/en/govorilka/ ka…
Ebee ka m nwere ike ibudata ọkwọ ụgbọala RNDIS Ethernet Gadget? Enweghị m ike ijikọ site na ntanetị wifi USB Ritech 600 na Windows XP
Ebee ka m nwere ike ibudata ọkwọ ụgbọala RNDIS Ethernet Gadget? Enweghị m ike ijikọ site na ntanetị wifi USB Ritech 600 na Windows XP Ọ bụrụ na ị maghị ụdị ngwaike ma ọ bụ enweghị ike ịchọta ...
Sonny tụgharịrị ihuenyo na laptọọpụ dị ala, Otu esi laghachi, nyere aka !!!
Sonny tụgharịrị ihuenyo ahụ na laptọọpụ, Olee otú ịlaghachi, nyere aka !!! na ntọala nke kaadị vidiyo ahụ. ruo eriri oche http://otvet.mail.ru/question/60832602/ - ruo ebe a ... Desktọpụ - pịa aka nri - njirimara eserese…. ebe ahụ hụ pịa…
Etu esi tinye okwuntughe na draịva “D” na PC?
Etu esi tinye okwuntughe na draịva “D” na PC? Ọ ka mma ịzobe ọdịnaya nke folda Zoo 2009 v3.9 Mee 3.9.5.695 Final http://www.cwer.ru/node/279807/ Zoo Ncheta bụ ngwa dị mma iji zoo nzuzo gị ...
Nyere m aka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka onye na-ebi akwụkwọ HP 11311 CHINDEN BLVD BOISE, IDAHO 83712 USA
Nyere m aka ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka HP 11311 CHINDEN BLVD BOISE, IDAHO 83712 USA, wụnye windo 7. -multifunction-printer-series / 1120 / model / 3447595 # Z3447597_7ICK3054K0UDA8AQC0TA11O930 Yuzai driverplus.ru Ebee ka i dere aha a…
Ebee ka ntọala Realtek dị na WIndows 7?
Ebee ka ntọala Realtek dị na WIndows 7? C: Mmemme FilesRealtekAudioHDA Na ogwe njikwa: AUDIO SETTINGS, Anyị ekwuola ebe a, jiri Driplus.ru Bido - Ogwe njikwa - Akụrụngwa na ụda - Realtek Dispatcher ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,404.